Baadidaba nin baa kula deydeya, daala kaabadan e Oon doonahayn in aad heshana, daa in abid kaaye Dadkuna moodi duul wada dhashoo,wa
12 Mar 2016 posted by [lonilya ] Dhulka soomaaliyeed ee Jubaland waxaa ka hana qaaday dawlad dhisan oo kamid ah fadaraalka soomaaliyeed taasoo lagu magacaabo DAWLADA JUBALAND. dhulkan oo ah marka la qiimeeyo guud ahaan gobolada dalka kan uugu barwaaqada badan soomaaliya.Waxaana ilaahay kumanaystay dagaankaan noocyada kala duwan ee khayraadka. dhulkan waa mid leh wabiyo
oo ku haboon beerashada noocyada dalagyada kala duwan.Waa dhul ku haboon dhaqashada nicmoolayda sida geela,loda iyo arigaba.Waa dhul leh khayraadka kaluunka uugu badan soomaaliya badaheeda barta laga helo.Waa dhul leh saliida ama waxa looyaqaan dheemanka madoow iyo gaas xaga bada iyo xaga bariga labadaba waa laga helay. Waa deegaan quruxbadan oo leh jaziirado iyo meelo lagu raaxaysto xaga nolasha oo aad uugu haboon dalxiiska raaxada iyo tamashlayntaba.
Dagaanka sidaan ah ayaa burburkii dawladii dhexe kadib noqday furin dagaal iyo goob lagu hardamo oo beelaha soomaaliyeed ku hardamaan tanoo keentay in uu dagaanku noqdo meel faqri iyo dib u dhac looga kala cararay.Waxay dhaxal siisay hormar la aan dhan walba leh,xaga waxbarashada,nabad galyada,caafimaadka,ganaacsiga,intaba degaankanaa u hooseeyay xiligii burburkii iyo dawlad la antii soomaaliya.
Dhulka soomaaliyeed ee Jubaland waxaa ka hana qaaday dawlad dhisan oo kamid ah fadaraalka soomaaliyeed taasoo lagu magacaabo DAWLADA JUBALAND. dhulkan oo ah marka la qiimeeyo guud ahaan gobolada dalka kan uugu barwaaqada badan soomaaliya.Waxaana ilaahay kumanaystay dagaankaan noocyada kala duwan ee khayraadka. dhulkan waa mid leh wabiyo
Dagaanka sidaan ah ayaa burburkii dawladii dhexe kadib noqday furin dagaal iyo goob lagu hardamo oo beelaha soomaaliyeed ku hardamaan tanoo keentay in uu dagaanku noqdo meel faqri iyo dib u dhac looga kala cararay.Waxay dhaxal siisay hormar la aan dhan walba leh,xaga waxbarashada,nabad galyada,caafimaadka,ganaacsiga,intaba degaankanaa u hooseeyay xiligii burburkii iyo dawlad la antii soomaaliya.hees wadani ah oo oranaysa “Towradan israacday miyay ka bukaan? hormarka angaaray miyay ka bukaan? hada waxaan leeyahay hormarka
jubaland miyay kabukaan? hartigan xlaasha ah miyay ka bukaan? madaxdan is raacday miyay ka bukaan? isirka is raacsan miyay ka bukaan?Genaraalada jubaland miyay ka bukaan? Waxaa kaloon xasuustay markaan arkay puntland dabinka ay u qoolayso had iyo jeer jubaland oo daacad ah gabaygii walaalkay janadii fardawso illaahay haka waraabshee QAMAAN BULXAN.wuxuu yiri sidan.mar uu layabay xigto lana socota kana socota sida hada puntland iyo jubaland ka taagan oo aniguba hada aan ula
yaabanahay sidii qamaan waagaa.
Bosaso24.com E-mail: bosaso24@bosaso24.com